आजको राशिफल : सोमबार कुन राशिको भाग्यफल कस्तो छ ? – Khabarhouse
आजको राशिफल : सोमबार कुन राशिको भाग्यफल कस्तो छ ?
Khabar house | २० बैशाख २०७८, सोमबार ०१:३२ | Comments
काठमाडौं : विसं २०७८ साल वैशाख २० गते सोमबार । इस्वी सन् २०२१ मार्च ०३ तारिख। नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । वैशाख कृष्ण पक्ष । तिथि–सप्तमी, ३४ घडी १७ पला, बेलुकी ०७ बजेर ०८ मिनेट उप्रान्त अष्टमी । नक्षत्र– उत्तराषाढा, २० घडी ५१ पला, दिउँसो ०१ बजेर ४५ मिनेट उप्रान्त श्रवण । काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर २५ मिनेट, सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ३७ मिनेट । दिनमान ३३ घडी ०१ पला ।
मेष : प्रतिस्पर्धीहरु परास्त हुनेछन् भने नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बुढुवा हुने योग रहेको छ । अध्ययनमा विजय हुने योग रहेको छ भने अन्य साथीहरुलाई किनारा लगाउँदै पुरस्कार हात पार्न सकिने छ । राजनीति तथा समाज सेवामा समय दिनेहरुले पद पाउने समय रहेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
बृष : अरूलाई सजिलै प्रभावमा पारेर काम लिन सकिने छ भने समाजमा जनताको काम गर्न सक्दा मान सम्मानमा वृद्धि भएर जाने छ । दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि तथा अनलाइनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फ’स्टाएर जानेछ । धा’र्मिक स्थल तथा मन्दिरतिर गई मनलाई शान्त पार्न सकिनेछ । सरकारी स्तरमा तपाईंको प्रभाव बढ्ने हुनाले समयमा कामहरु बन्नेछन् ।
मिथुन : वाद वि’वाद तथा झै झ’गडाबाट टाडै बस्नुहोला, अनावश्यक धन तथा स्थायी सम्पत्ति हानि हुन सक्छ । अध्ययन अध्यापनमा मन नजाने हुनाले प्रतिस्पर्धीहरु हाबी हुने छन् । आम्दानीको तुलनामा खर्च अधिक हुने हुँदा दैनिक गुजार गर्न गाह्रो हुनेछ । घरपरिवार तथा चेली माइती बीच सामान्य कुरामा राय बाजिनेछ । व्यापार व्यावसायमा भनेजस्तो आम्दानी नहुने हुँदा तिर्नुपर्ने ठाउँमा रकम दिन नसक्दा मन खिन्न हुनेछ ।
कर्कट : माया प्रे’ममा नजिक हुने समय रहेको छ भने जीवन साथीको सहयोग पाइने छ । अध्ययनमा विद्यार्थीहरुले चाहेजस्तो नतिजा हात पार्न सक्नेछन्। वि’लाशी वस्तुको प्रयोगमार्फत अरूको मन तान्न सकिनेछ । प्रियजन भेट हुनेछ भने आथ्यिपूर्ण सम्मान पाइने योग रहेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
सिंह : काममा अनयासै हस्तक्षेप गर्नेहरुलाई किनारा लगाउँदै अगाडि बढ्न सकिनेछ । अदालती निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा आउने छन् भने विवादित विषयहरु आफ्नै पक्षमा फैसला गराउन सकिने छ । अध्ययनमा प्रगति भई भनेजस्तो नतिजा हात लगाउन सकिनेछ । प्रे’म तथा मित्रताको बन्धन क’सिलो हुनुको साथै जीवन साथीले हरेक पाइलामा समर्थन पाइने योग छ ।
कन्या : अध्ययनमा मन जाने तथा ध्यान केन्द्रित हुनाले आफूले चाहेजस्तो सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ। आफन्त तथा गुरुजनहरुको सुझावलाई शिरोधार्य गर्दै अगाडि बढ्न सकिनेछ। मन परेको मानिसबाट उपाहार तथा भौतिक सम्पत्ति पाउने योग रहेको छ भने प्रे’ममा सामीप्यता बढेर जानेछ । सन्तान, छोराछोरी तथा आफन्तसँग रमाइलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ ।
तुला : व्यावसायमा नाफा कमाउन निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्नेछ । सवारी साधन तथा घर जग्गाको कारोबारबाट केही मात्रमा लाभ लिन सकिने छ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन बढी नै मिहिनेत गर्नु पर्ने छ । आमा तथा आमासरहका मानिससँग मन मु’टाव बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी स’मस्याले पिरोल्नेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुनेछैन । तर पनि कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
बृश्चिक : अदालती तथा न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईंकै पक्षमा हुनेछन् । दाजुभाइ तथा आफन्तको सहयोगल राम्रा काम गर्न सकिनेछ । माया प्रे’मको डोरो कसिएर जानेछ भने जीवन साथीको सम्बन्ध थप प्रगाढ भएर जाने छ । छोटो तथा रमाइलो यात्राको सम्भावना भए पनि यात्राका क्रममा ध्यान दिनु जरुरी छ । पढाइ लेखाइमा सुधार गर्न सकिने तथा नतिजा हात पार्न सकिनेछ ।
धनु : अध्ययन अध्यापनमा मन जाने हुनाले नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । पारिवारिक जमघटमा सहभागी भई मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। आफन्त तथा कुटुम्बहरुको सहयोग तथा समर्थन रहने हुनाले नौलो प्रकृति को काम गर्न जागर चल्नेछ । माया प्रे’ममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ भने थोरै बोलेर प्रशस्त रुपैयाँ पैसा कमाउन सकिनेछ ।
मकर : राजनीति तथा समाज सेवामा गरिएको लगानी खेर जाने छैन भने पद पाउने योगलाई नकार्न सकिँदैन । सामाजिक कामहरु समयमा सम्पादन हुने हुनाले मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जाने छ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने हुँदा मन प्रशन्न हुनेछ । प्रे’ममा सफलता तथा सा’मीप्यता बड्नेछ । विद्यामा गरिएको लगानीबाट राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
कुम्भ : अस्वाभाविक खर्च बड्ने हुँदा मन चिन्तित रहनेछ । शारीरिक क’ष्ट तथा आँखामा स’मस्या देखिन सक्छ । मान सम्मान तथा इज्जत प्रतिष्ठा गुम्ने खतरा रहेको छ सजक रहनुहोला । व्यापार व्यावसायमा नाफा कमाउन निकै नै सङ्घर्ष गर्नुपर्ला । विद्यामा सोचे जस्तो प्रगति गर्न निकै समय कुर्नुपर्नेछ । आफन्त तथा परिवारजन तपाईंदेखि टाडिन सक्छन् । तर पनि वैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यावसाय भने फस्टाएर जानेछ ।
मीन : पै’त्रिक धन सम्पत्ति हात लाग्ने योग रहेको छ । दाजुभाइबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनाले अरूभन्दा एक कदम अगाडि बढी सफलता हात पार्न सकिनेछ । आफूले सोचेका तथा चाहेका वस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाउँदा मन प्रफुल्लित हुनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाइ वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । तपाईं दिन शुभ रहोस । युवा ज्योतिषी डीपी भण्डारी